0600GMT TSR Alert for LUPIT | Myanmar Weather and Natural Disaster Informations
0600GMT TSR Alert for LUPIT
ဖိလစ်ပိုင်ပင်လယ် မြောက်ပိုင်းသို့ ဆက်လက်ရွေ့လျားနေသော စူပါတိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းသည် အဆင့်-၂ CAT-2 တိုင်ဖွန်းမုန်တိုင်းအဖြစ်သို့ အားလျော့သွားပြီး ယနေ့ည သို့မဟုတ် မနက်ဖန်(အောက်တိုဘာလ ၂၁ ရက်) နံနက်ပိုင်း လာမည့် ၁၂ နာရီမှ ၂၄ နာရီအတွင်း တွင် အနောက်-အနောင်တောင်ဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်မည်ဟု JTWC မှ ခန့်မှန်းထားပါသည်။ အနောက်-အနောက်တောင်ဘက်သို့ ဦးတည်ရွေ့လျားချိန်တွင် ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင် အပူချိန်နှင့် လေထုမတည်ငြိမ်မှုများကြောင့် အဆင့်-၃ CAT-3 (လေတိုက်နှုန်း တစ်နာရီလျှင် ၁၈၅ ကီလိုမီတာ – ၁၁၅ မိုင်နှုန်း) သို့ ပြန်လည်ရောက်ရှိလာနိုင်ကြောင်း ၊ လာမည့် ကြာသပတေးနေ့ ညနေ (အောက်တိုဘာလ ၂၂ ရက်နေ့ ညနေ) တွင် Cagayan အရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းသို့ ဖြတ်ကျော်ဝင်ရောက်မည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း ၊ ဆက်လက်၍ Aparri မြို့နှင့် Tuguegarao မြို့ ၂ မြို့ ကြားကဒေသစံတော်ချိန် အောက်တိုဘာလ ၂၃ ရက် – သောကြာနေ့ နံနက်ပိုင်းလောက်မှာ ဖြတ်မယ်လို့ ခန့်မှန်းထားကြပါတယ်။
ဒေသစံတော်ချိန် သောကြာနေ့မွန်းလွဲပိုင်းမှာ Kalinga နဲ့ Ilocos ကိုညနေပိုင်းအထိ ဆက်လက် ဖြတ်သန်းပြီး စနေနေ့ နံနက်ပိုင်းမှာ တောင်တရုတ်ပင်လယ်ထဲကို စတင်ဝင်ရောက်မယ်လို့ T2K ကြေငြာချက် #019 မှာ ဖေါ်ပြထားပါတယ်။ အဲဒီကြေငြာချက်မှာဘဲ အောက်တိုဘာလ ၂၅ ရက် တနင်္ဂနွေနေ့ မှာ ဟိုင်နန်ကျွန်းနဲ့ ဗီယက်နမ် တို့ဘက်ကို ဆက်လက် ဦးတည်ရွေ့လျားနိုင်ကြောင်း ၊ အကယ်၍များမုန်တိုင်းရဲ့ ရွေ့လျားရာလမ်းကြောင်းဟာ တောင်ဘက်သို့ အခုထက်ပိုပြီးဆင်းလာဦးမယ်ဆိုရင်တော့ ဖိလစ်ပိုင်နိုင်ငံ Isabela ပြည်နယ် နဲ့ Benguet, La Union တို့ကို ဖြတ်ကျော်တိုက်ခတ်နိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ သို့ပေမဲ့ ဒီဖြစ်နိုင်ချေဟာ နည်းပါးပါတယ်လို့ ဆိုပါတယ်၊ အဲဒီ ဖြစ်နိုင်ချေနည်းတဲ့ ခန့်မှန်းချက်ဖြစ်လာမယ်ဆိုရင်တော့ တရုတ်ပြည်အရှေ့ပိုင်းကမ်းရိုးတန်းဒေသတွေ အခု အန္တရာယ်ကနေ လွတ်မြောက်နိုင်ကြောင်း T2K ခန့်မှန်းချက်အား ကိုးကားတင်ပြလိုက်ပါတယ်။
Storm Alert issued at 20 Oct, 2009 6:00 GMT
Posted in Weather Alert, Weather News. Tags: LUPIT, super-typhoon, typhoon, weather. LeaveaComment »
« စူပါတိုင်ဖွန်း LUPIT update-20OCT-01
ကပ္ပလီပင်လယ်အတွင်း အင်အားအသင့်အတင့်ရှိမြေငလျှင်တစ်ခုလှုပ် »